Niharan'ny hetraketraky ny Photoshop i Stéphanie Tsakarao - Vaovao farany
Home / graphiste / kanto / olo-malaza / Photoshop / sary / Stéphanie Tsakarao / teknolojia / Niharan'ny hetraketraky ny Photoshop i Stéphanie Tsakarao
Loza no nahazo ny sarin'ity mpanakanto mihira an'ilay hira milohateny hoe "Mahatsiaro" ity. Raha nikasa ny hampiditra ny sarin'i Stéphanie Tsakarao tamina lahatsoratra ny gazety lehibe iray dia voasintona tsy nahy ilay sary ka dia lasa nifotetaka tanteraka ny tarehin'ny tovovavy.
Ny antony, fikitihana diso lalana tamina "logiciel" fikirakiràna sary izay fantatry ny be sy ny maro (Photoshop) izay tena nanimba tanteraka ny endriky ny mpanakanto ka nila tsy ho fantatra endrika intsony. « Tena loza ity, zava-doza, tsy rariny izao » hoy i Ortense, nijoro taorian'ny sezan'ilay "graphiste" nanomana ny sary. Nanazava ny mety ho anton'ilay tsy fetezana ny vavolombelona tafaresaka taminay teo : « Tsy nohamarinin'ilay graphiste ny échelle nampiasainy. Saika hahenany 20% ny hangezan'ny sary kanefa tsy nampihariny tamin'ny refy rehetra. Noho izany dia simba ilay sary ». Ireo vavolombelona nanatrika teo dia kivy avokoa nahita ny sary, ary nanambara fa ho sarotra tokoa raha ny hanadino ity loza ity : « Fisaka tanteraka ny tava, voarirotra ny maso, mahonena ilay fijery sanatria toa miantso vonjeo. »
Soa ihany fa nampiasa « Ctrl + Z » haingana dia haingana ilay mpikirakira ka niverina tamin'ny laoniny ny sary. Raha ny filazan'ny manam-pahaizana dia tokony tsy dia hisy fiantraikany atahorana ity seho-javatra ity satria kinga ilay graphiste, fotoana fohy fotsiny no nisehoan'ny tsy fetezana.
Niharan'ny hetraketraky ny Photoshop i Stéphanie Tsakarao Reviewed on octobre 22, 2014 Rating: 5
graphiste X kanto X olo-malaza X Photoshop X sary X Stéphanie Tsakarao X teknolojia